Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Tuubooyinka Gacanta Labaad ee Qolka Musqusha / WOWOW Musqusha Qiiqa Musqusha Oo Lagu Nadiifiyo Nickel Baafin
qiimeeyay 4.94 out of 5 ku salaysan 18 ratings macaamiisha
(18 dib u eegista macaamiisha)
SKU: 2321300 Categories: Qubeyska Musqusha, Tuubooyinka Gacanta Labaad ee Qolka Musqusha Tags: qasacad-qas, saddax dalool oo dalool leh, Fidsan
Kani waa qasabad tayo wanaagsan leh. Waxay u socotay si fudud (adeegso tilmaamaha) waxayna la timid tuubbooyin iyo daaqada pop.up. Tani waa markii ugu horeysay ee aan soo baxo. Ka fikir inaan jeclaan doono. Waxaa laga yaabaa inaysan timo badan ururin doonin oo ay tahay in la nadiifiyo. Kaliya waxay ku jirtay dhowr maalmood sidaa darteed faallo kama bixin karo muddada dheer. Mar labaad ayaan dalban lahaa.
Tilmaamo hagaagsan oo baakad leh iyo tilmaamo wanaagsan oo wanaagsan. Si fiican loo rakibay. Qiimo aad u weyn oo qasabad ballaadhan leh. Waan ku faraxsanahay inaan isku dayay oo aanan ka waaban doonin inaan dib u dalbado markaan u baahdo mid kale. Ubax wuxuu ahaa taabasho fiican
Fududeynta rakibidda, waxay qaadatay qiyaastii 15 - 20 daqiiqo in la rakibo. Injineernimo loogu talagalay 'DIY' oo waxaan ahay ku dhowaad 70 sano jir inaan qaato si aan ugu foorarsado wax aan waxba tarayn oo aan uga soo kiciyo rakibidda. Ka dib rakibidda rakibtay oo aan daadinno daadi ama quudin. Aad ayaa ula dhacay sheyga. Waan dufanay dhamaan qalabyada inkasta oo ay sabab u tahay xaqiiqda ah inay qaadatay laba maalmood in meesha laga saaro tuubada duugga ah sababtuna tahay isku xirnaanta oo dhan qabowgu waa inuu jaray qasabaddii hore. Qiimuhu sidoo kale wuxuu ahaa cunsur aad loogu qiimeeyay tayada wax soo saarka. Si fudud loo rakibo xitaa uma baahnin tilmaamaha la bixiyay.
Qasabado ayaa la keenay oo la rakibay maanta. Qasabadaha wanaagsan, qiyaastii kala bar qiimaha Delta ama Price Pfister u dhigma dukaamada sanduuqa waaweyn. Ma ogi sida ay u qaban doonaan muddada dheer laakiin waxay leeyihiin dareen adag oo wanaagsan rakibiddooduna waxay ahayd mid toos ah. Soo daadinta bullaacaddu waxay ahayd muuqaal aad u wanaagsan qiimahan. Yaraynta hal xiddig maxaa yeelay laba boolal oo loo isticmaalo in lagu adkeeyo qaboojiyaha kulul / qabowga hoostiisa miiska ayaa la waayey. Waxaan rakibay anigoo isticmaalaya kaliya lowska kujira laakiin boolalku waa muhiim si loo xakameeyo xakamaynta kumana aysan jirin xirmo.
Waa mid aan qaali ahayn, oo lagu sameeyay Shiinaha, tilmaamuhuna si sax ah uguma aysan habboonayn qasabadda laakiin… WOW !! Waxaan la yaabay tayada qaybaha iyo sahlanaanta rakibidu waxay ahayd lama filaan aad loo soo dhoweeyay. Waxay bedeshay Qiimo aad u qaali ah Pfister oo macno ahaan noqotay mid aan shaqeyn karin dhowr sano gudahood. Waxay igu qaadatay 5.5 saacadood si aan uhelo Pfisterka oo aan laxakamaynin heerka miridhka iyo daxalka- runti waxay ahayd inuu qaboojiyo weelka sare ee gacanka biyaha kulul kuna rido dusha sare ee saxanka si uu uga baxo. Rakibidda tuubbada cusub ee WOWOW ayaa igu qaadatay wax ka yar 1 saac, ma jiraan wax daadinaya, muuqaal la yaab leh! Iibso! Xitaa haddii ay sii socoto oo keliya hal sano ama laba (oo aan filayo inay sii dheeraato xitaa iyadoo leh biyo adag AZ), yaa daneynaya? Qiimahaan, ku iibso mid kale oo ku tuur waqti aan dheereyn. Waxaan gabi ahaanba, si togan u iibsan lahaa tan mar kale!
Shaki baa i galay markaan amarka bixiyay. Xaqiiqdii waxay u muuqdeen kuwo qurux badan, laakiin inaan ahaa shirkad calaamadeysan ayaan diyaar u ahaa inaan dib ugu celiyo iyaga haddii aysan tayo lahayn. Laakiin waxay u muuqdeen kuwo ka baxsan sanduuqa, way fududahay in la rakibo oo si qumman u shaqeeya! Waan kula socodsiin doonaa haddii taasi isbedesho, laakiin illaa iyo hadda wax qoomamo ah kama qabin inaan iibsado, waxaanan u soo iibsaday 2 nooc laba jibbaar!
Tuubadaani lama rakibi doono laba todobaad oo kale marka dib u habeynta ay bilaabato. Sikastaba ha noqotee, runtii waxaan kuu sheegi karaa in muuqaalka guud ee qasabadani runtii aad ufiican yahay sedexda qaybood ee ugu waaweynna waxay kujireen weel dhar kala duwan ah. Waxaan hubaa inaan rajeynayo inay tani calaamad u tahay tayada wax soo saarkan.
Ka culus sidii aan filayey. Waxay umuuqataa wax aan waxba tarayn. Qalab fudud oo fudud, dhammaan qaybaha loo baahan yahay waxay la yimaadeen qasabad. Mid la mid ah ayaa laga helay dukaankeenna maxalliga ah laakiin waxay ahayd 3 jeer kharashka kan. Mar labaad iibsan lahaa
Waxaan ku cusboonaysiiyay suuligayga waxyaabo cusub. Tuubadaani waxay ahayd sida saxda ah ee aan doonayay laakiin waxay ahayd mid aad uga jaban dukaamada sanduuqa waaweyn. Waxaan ku sigtay inaan la qabsado wax aanan jeclayn illaa aan tan ka helo. Hada aad ayaan u faraxsanahay.
Anigu waxaan ahay qandaraasle waana inaan dhahaa kuwani runti waa tayo wanaagsan qiimaha. Si fudud loo rakibo oo si aad u wanaagsan loo sameeyay oo loo xirxiray. Isla qasabada ku taal dukaamada sanduuqa weyn ayaa laba jibbaar qiimaha.
Waxaan isla markiiba jeclaaday muuqaalka qasabadani. Waxaan dhawaan iibsaday wax aan waxba tarayn tanina waxay umuuqataa mid fiican. Waan kugula talinayaa waana ku faraxsanahay sheyga.
Tubooyinkaani waxay ahaayeen uun wixii aan ugu baahanay inaan ku cusboonaysiinno musqushayada. Naqshad wanaagsan & tayo leh qiimo wanaagsan & gaarsiin degdeg ah.
Lagu rakibay 2 qolka qubeyska
Tuubada sifiican ayey u sameysan tahay isla markaana abuuristu aad ayey u fududahay. Tilmaamuhu wuu kufiican yahay mana aysan tusin qalabka birtu inay yihiin fiilooyin heer qaran ah. Way fududaan doontaa in la dayactiro ama la beddelo sababta oo ah sida qasnadda loo hubiyo waxay suurtagal noqon doontaa in lagaa qaado iyadoo la marsiinayo darawal iyo faro. Naqshad weyn
Waxaan ku rakibay waxsoosaar kasta oo qasabadaha ku kacaya 3-4 jeer qiimaha midkaan - wuxuu leeyahay tayo haddii sida ugufiican ama sifiican loo rakibo oo gebi ahaanba ku faraxsanaa iibsiga
Qiimo aad u fiican. Muuqaal casri ah oo aad u nadiif ah iyo wax soo saar tayo sare leh. Tuubaheyga ayaa aad ula dhacay. Waxa ugu fiican ee aniga igu saabsan waa taabashada dareeraha taabashada - ma jiro wax jaban oo jebiya!
Tani waa qasabad aad u qurux badan, iyo heshiis weyn. Tuubiilaha ayaa i weydiiyay halka aan ka helay maxaa yeelay wuxuu doonayay inuu xoogaa iibsado.
Tuubbo cajaa'ib leh oo shaqsi ahaanba ku duuban bacaha marokooda si aysan u xoqin - haddii qof ii rakibo oo uu aad ugu fududaaday tilmaamuhuna way caddaayeen - waxay weydiisteen inay leeyihiin tuubbooyin maydhasho oo iswaafajiya maxaa yeelay waan amrayaa mid!
Tuunbooyinku waxay ahaayeen kuwo tayo fiican leh waxayna u muuqdaan kuwo fiican. Ku rakib si fiican ayey u dhacday dhibaato la'aan. Waxa kaliya ee aan jeclaan lahaa ayaa ah in khadadka biyahu ay yara adkaadaan. Waxay ahayd in laga taxadiro marka la isku xidhayo khadadka biyaha.
La iibiyey: 47